Dhigaalka oo lagu daray khibrad farsamo
Tusaale ahaan, waxaad ku qaadan kartaa wakhti goobta shaqada si aad ugu hadasho afka adoo kula hadlaya Af Iswiidhish saaxiibada shaqada oo baranaya sida goobta shaqadu u shaqayso. Casharada dhigaalka aha iyo hadalo la jeedinayo oo ka dhacay Eductus. Casharka dhigaalka ah waxa uu xooga saaraya suuqa shaqaalaynta iyo tababarka xirfadda Iswiidhishka ah.
Qorshaha waxbarashada ee shakhsiyeed
Si aad degdeg ugu gaadho ujeedadaada, adiga iyo macalinkaaga Educts waxay ku bilaabaan u diyaarinta si wada jir ah qorshe wax barasho. Koorasadan waxaa loo fulin karaa mid uun si buuxda- ama nus gelin ahaan. Waxay ku dhammaataa 10 wiig laakiin way ka gaaban kartaa waanay ka dheeraan kartaa.
Ku dar tababarka xirfadeed
Haddii aad doonayso in aad ku darto Tababarka xirfadaada Iswidhish tababar xirfadeed, sidoo kale tan waad nala samayn kartaa. Waxaanu bixinaa koorsooyin bilow ah ama qaybo kala duwan, tusaale ahaan, Warshadaha, ku kaydinta alaabta bakhaarada/gaadiidka, adeegyada/tafaariiqda iyo daryeelka caafimaad/dugsiyada/daryeelka bulshadda. Sidoo kale waxaad ku dari kartaa koorsooyinkaaga shaqo hordhac ah (instegsjobb) ama SFI.